Global Voices teny Malagasy · 13 Jolay 2018
13 Jolay 2018
Tantara tamin'ny 13 Jolay 2018
Miatrika olana maro ao Iran, tahaka ny hafa, ny bilaogera. Tranonkala Iraniana maro amin'ny ankapobeny, ary ny politika no tena voasivana. Tao anatin'ny roa taona farany, nanjary niha-ratsy ny fanivanana sy ny sivana. Indrindra fa marobe ireo bilaogim-behivavy voasivana.
Ao Iran, misy olona milaza ny tenany ho te-ho martiora ary manao hetsika ao an-tanàna mba haneho ny fahavononany ho faty ho an'ny Repoblika Islamika. Herinandro vitsy lasa izay, nanasa bilaogera maromaro manana fomba fijery samihafa mba hizara ny hevitr'izy ireo momba ireo te-ho maritiora i Mohammad Masih.
Notendrena hifaninana tao amin'ny World's Best Blog (bilaogy tsara indrindra erantany) ny Rising Voices
Mediam-bahoaka13 Jolay 2018
Notendrena hifaninana ao amin'ny "Best of the Award Blogs" (Lokan'ny Bilaogy Tsara Indrindra) (BOB) tamin'ny sokajy "Best Weblog" ny tetikasa fanentanana momba ny fampahalalam-baovaon'olontsotra ao amin'ny Global Voices , Rising Voices. Tranonkalam-bilaogy maherin'ny 8.500 no natolotra hotendrena ary vondrom-pitsara iray no nifidy ireo 11 farany isa-tsokajy miisa 16.
Dimy minitra miaraka amin'i Lova Rakotomalala
Antsafa13 Jolay 2018
Tao amin'ny We Media Miami no nahafahako nipetraka sy niresaka tamin'i Lova Rakotomalala , iray amin'ireo mpandrindra ny fandaharan'asan'ny bilaogy fanentanana FOKO Madagascar . Noraketinay ity antsafa fohy ity izay namaritan'i Lova ny genesisin'ny FOKO sy ny fomba fiasan'ny fikambanana amin'ny fanatanterahana ny iraka ataony.